11/07/2016 - 13:38
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်း အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တိဘက်ဒေသ ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစိုးရ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ MR. BIANBA ZHAXI ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကလာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တိဘက်ဒေသ ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဒုတိယအကြီးအကဲ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစိုးရ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Bianba Zhaxi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က (၇.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့ (၁၄၃၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-20) ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
11/07/2016 - 00:09
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တိဘက်ဒေသပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစိုးရဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ MR. BIANBA ZHAXI ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တိဘက်ဒေသပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစိုးရ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Bianba Zhaxi နှင့်အဖွဲ့အား (၇.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-20) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
10/14/2016 - 00:08
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. MR. SOK CHEA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Sok Chea အား (၁၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နေ့ (၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထို့သို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။